Isikhathi esining impela, ngesikhathi siyofuna umsebenzi ophambili phambi senzakalo siqu, abaqashi ucelwa ukuthumela phindela. Njengomthetho, izinkampani okuqinile ngodondolo enkulu abasebenzi nje awunaso isikhathi esanele ukuba aqhube interview isicelo ngasinye. Ngakho-ke, ukuze uqhube kubhala kufanele ithathwe ngendlela sina konke okusemandleni, njengoba kwakunjalo, kuzoba ubufakazi bokuthi umfakisicelo ukuba sikhundla evulekile.
Ukufingqa. Umbono ovamile. Yini ukubhala iCV?
Ukufingqa - idokhumenti lapho ofaka isicelo kumele abonise yakho isipiliyoni kanye namakhono, ukwethula izici siqu. Yakhe ebhalwe kahle - isinyathelo sokuqala ukuthi angaletha umgomo zaziswe.
Lapho lokubhala qhuba kumelwe banamathele ohlelweni elandelayo:
Isibongo, igama lokuqala, isithombe.
Usuku nendawo esizalelwa kuyo.
ikheli zokuhlala, ngocingo, nge-imeyili.
Ecacisa isikhundla oyifunayo.
Ezemfundo (igama lesikhungo, lunye, futhi ekupheleni konyaka yokwemukela).
Experience, endaweni yomsebenzi, kusukela ngonyaka odlule, isizathu sokuxoshwa.
PC ulwazi futhi ubungoti ngezilimi zakwamanye amazwe.
Ukuze uthole olunye ulwazi.
Imininingwane engeziwe ku isifinyezo
Uma zonke izinto ngokwehlukile, yonke into icacile, ulwazi olungeziwe ke kuyinkinga. Isikhathi esining impela, abaningi bebuza: "Hlobo luni lokwaziswa okufanele ukuboniswa kuwo?" Kufanele kuqashelwe ukuthi lesi sigaba akuyona impoqo kodwa khona kwalo ezifudumele abaqashi, ikakhulukazi umsebenzi ezinkampanini zasekhaya.
Imininingwane engeziwe elakhiwa ulwazi mayelana siqu izimfanelo, izithakazelo, ukwenza izinto zokuchitha isizungu, izithakazelo wesicelo. sokuhlanganiswa Ofanele lento inikeza cishe 100% isiqinisekiso for isimemo interview. Amagugu nezintshisekelo ku isifinyezo kuzosiza lihlukaniswe lonke, echaza umuntu, hhayi nje njengomuntu professional omuhle, kodwa futhi njengoba ubuntu amaningi.
Kungani abaqashi unesithakazelo ezintweni ozithandayo kanye nezithakazelo abasebenzi?
Abaholi izinkampani ukukhula zihlale esiqotho endleleni abasebenzi bachithe isikhathi sabo mahhala. Futhi lokhu akuyona ilukuluku lutho. Kubo, into eyinhloko ukuthi inkampani isebenza hhayi kuphela kancane kancane, kodwa elikhula ngokushesha. Nokho, uma umsebenzi okhetha ukuchitha isikhathi nabangane phezu iziphuzo, ekuseni into abangayilindela kuye umsebenzi elithelayo.
Lapho ekhetha abaqashwa kubaholi kubaluleke kakhulu ukuba kahle kwanikwa izithakazelo nokuzilibazisa e isifinyezo.
Isibonelo isikhundla sokuba ofundisa umlando: e "ulwazi olwengeziwe" obengenele ukhetho babe abanothando iminyuziyamu futhi imivubukulo. Lolu lwazi ephawula ohlangothini zalo ezinhle, okubonisa kangakanani ukuzinikezela uyabathanda ayekufundisa.
Uhlangothi negative kwento "ulwazi"
Ukukhetha izithakazelo nokuzilibazisa lo msebenzi, kumele uqaphele kakhulu, ngenxa yokuthi ezinye ulwazi kungadala ukusabela okungekuhle yomqashi. Akunakusetshenziswa akudingeki agqoke up wena bese beveza wokuzilibazisa non-akukho. abasebenzi bethu esabuzwa uzokwazi kweso ukubona ngokusebenzisa hype, futhi ofaka isicelo sesimweni kunalokho esiyinkinga.
Lapho kokuqeda lesi sigaba, abaningi benza iphutha elifanayo, indinganiso ukufakwa kuhlu izinto zokuzilibazisa. Nokho, abazi ngisho ukucabanga mayelana nokuthi bakuphatha kanjani sihambisana isikhundla oyifunayo. Ngezinye izikhathi ngisho izikhundla eziphikisa echazwe izithakazelo nokuzilibazisa e isifinyezo. Isibonelo: ofaka isicelo sokuba umphathi yokuthengisa isifinyezo waphawula ukuthi esebenzayo football fan. Kungakhathaliseki nesithakazelo umqashi Imininingwane ikusasa elinjalo nokuthi ingabe uyafisa yini okujabulisa ithemba ukubona isisebenzi ifomu yakhe unpresentable nge nemivimbo imihuzuko?
Ikakhulukazi kudingeka uqaphe uma ohlanganyela emidlalweni izinto zokuzilibazisa. Ukwaziswa okunjalo kufanele licaciswe kuphela uma kuba ngqo ezidingekile umsebenzi.
Yini ukwenza izinto zokuchitha isizungu kukhonjisiwe isifinyezo? ongakhetha Universal
Ngokuvamile, inhloko yabangamashumi Okuthandayo Imisebenzi umsebenzi abazoba nje ukwazi ukuthi kungase kuthinte umsebenzi wakhe. Ngakho-ke kungcono ongakhetha umphelelisi futhi embule efaneleyo, okuyinto ngqo exhumene isikhundla othize uzwakale.
Okuthandayo nokuzilibazisa e isifinyezo - isibonelo kukho okujwayelekile:
egcwele nemidlalo ehlukahlukene;
abanothando lomculo, amabhayisikobho, eqanjiwe;
imisebenzi yokudala, afana nemigwalo okufaka izithombe;
Ukutadisha ingcaca software design noma PC wokusebenza;
lwaya ngezilimi zangaphandle.
Indlela abaqashi zisebenzisa ulwazi mayelana izinto zokuzilibazisa?
Funda ukuthi umuntu uthanda ukwenza ngesikhathi sakhe sokuphumula, ungakwazi ukubikezela cishe ngokunembile imfanelo yakhe kanye nekhono. odokotela bengqondo abanolwazi ngifuna qhuba futhi, ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze le ukwenza izinto zokuchitha isizungu ozobhapathizwa njengoba lento engase ikusho umuntu kuka Bonke abanenhliziyo langaphambilini, ngisho nokubikezela ikusasa lakhe ebholeni.
Kanjani ncamashi zembula okushiwo izithakazelo nokuzilibazisa ezichazwe isifinyezo? Isibonelo - Ukukhethwa candidates for the isikhundla umphathi ukukhangisa. Uma umfakisicelo unesithakazelo ngebhayisikili umjaho, e ubuntu bakhe esingokwemvelo ukuba nginqobe ubunzima, isifiso ukuze kuthuthukiswe, ukukhuthazela ukusebenzisana. Lezi izici kutsikamete imisebenzi eyenziwa, futhi umsebenzi enikeziwe msebenzi.
Ukusebenzisa inhlangano ezingokwengqondo, singakwazi ukuthola ngokunembile nobuntu umuntu ofaka isicelo isikhundla othize:
ukunitha, ukuthunga - okuhlushwa, ukuphikelela, ukubekezela;
izithombe, imidwebo - amakhono zokudala futhi kwezobuciko, umuzwa lihle ukunambitheka;
izinkanuko kakhulu - ukuzethemba, ukuzimisela;
Psychology - sociability, ukucindezeleka, emakhonweni.
Uma wokuzilibazisa ayixhunyiwe ne umsebenzi, khona-ke ungalilahli ithemba, kusadingeka ukuba ucacise e isifinyezo. Lolu lwazi izobonisa tshala futhi kuyoba usizo kakhulu. abasebenzi Ihhovisi ukulingana passion ezemidlalo, sibonga kuye, ukuze ubuyisele ukulingana ebalulekile ebasiza akhulule ukukhathala ukucindezeleka kwengqondo.
Ngakho, ukugcwalisa umsebenzi, musa ukuyiziba iphuzu izithakazelo nokuzilibazisa, yena, sinjalo ngqo ukuthi akwazi ukunikeza isicelo imibhalo okwakhe, okubangela isithakazelo kumuntu wakhe futhi kugqame ohlwini jikelele ukhetho.
Indlela ukubhala incwadi ikhava kuya qhuba nezinsalela isiqinisekiso umsebenzi.
Kafushane, wokuzilibazisa iphuzu kangcono?
Ulwazi kanjani ugcwalise phindela - isinyathelo sokuqala umsebenzi wokuziphilisa omuhle
Indlela Dala Qalisa, owaphawula?
Ukulala komntwana - usayizi nekhwalithi yekhwalithi
Fluid for ugwayi electronic Cosmic Inkungu - a godsend abathandi dessert amamiksi
Engineer low-voltage izinhlelo: ukuqeqeshwa, incazelo umsebenzi